विपद् आइपरे जोगिन सिक्दै स्थानीय – Chitwan Post
स्थानीय नेपाली सेनासँग विपतबाट जोगिने कला सिक्दै ।
भरतपुर । तत्काल गाउँबस्तीमा बाढीपहिरोलगायतका विपद् आइपरे के गर्ने ? कसरी त्यो विपद्बाट आफू र अरुलाई बचाउने ? कसरी घरेलु स्रोतसाधनबाटै विपद्को व्यवस्थापन गर्ने ? जस्ता प्राकृतिक विपद्का समस्याबाट पिरोलिएका स्थानीयले मुक्ति पाएका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाका पाँच वडाका स्थानीयले विपद् आइपरे जोगिने कला सिकेका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाको बाढीबाट बढी प्रभावित भएका २२, २३, २४, २७ र २८ नं वडाका स्थानीयलाई प्राकृतिक विपद्बाट जोगिने कला सिकाइएको छ । यसको चाँजोपाँजो नेपाली सेनाको बटुक दल गण कसराले गरेको थियो ।
भरतपुर २३, जगतपुरमा दिइएको तीन दिनको तालिममा स्थानीय ५५ जनाले घरेलु स्रोतसाधनको प्रयोग गरी प्राकृतिक विपद् आइपरे जोगिने कला सिकेका बटुक दल गणका गणपति अरूण श्रेष्ठले जानकारी दिए । नेपाली सेनाको विपद् उत्थानशील समाजको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको तालिममा जतिबेला विपद् आइलाग्यो त्यतिबेला आफूसँग भएको घरेलु साधनको प्रयोग गरी जोगिने कला सिकाइएको गणपति श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार स्थानीयलाई बाढीपहिरो, आगलागीलगायतका विपदबाट कसरी जोगिने भनेर अभ्याससमेत गराइएको छ । यसबाहेक विपद व्यवस्थापनको क्षति न्यूनीकरण, विपदमा परेकाहरुको उद्धारलगायतका विषयमा पनि स्थानीयलाई सिकाइएको थियो ।
‘विपद्को पूर्वतयारी, विपद्मा परेपछि घरेलु स्रोतसाधनबाटै जोगिने कला र विपद् आइपरे हुने क्षति न्यूनीकरणको विषयलाई प्राथमिकता दिएर स्थानीयलाई सिकाइएको छ’, गणपति श्रेष्ठले भने, ‘तालिमपश्चात् वर्षाको समयमा राप्ती तथा नारायणी नदी बढ्न गई हुने डुबान तथा अन्य प्राकृतिक विपदबाट जोगिन सक्नेछन् ।’
मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति केरूङ्गा र वडा कार्यालयसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम आयोजना गरिएको बटुक दल गणले जनाएको छ ।
सेनानी प्रदीप थापा, बालचन्द्र अधिकारी क्षेत्रीले स्थानीयलाई विपदबाट जोगिने कला सिकाएका थिए । स्थानीयलाई वन्यजन्तुबाट बच्ने तरिका र विपद् व्यवस्थापन गर्न चाहिने सामग्री बनाउने कलासमेत सिकाइएको थियो ।
विपद्बाट जोगिने कलामात्र होइन, स्थानीयलाई वन्यजन्तु तथा प्रकृति संरक्षणसम्बन्धी चेतनामा समेत जोड दिइएको थियो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत रमेशकुमार यादवले सबै जनाको सामूहिक प्रयासबाट प्रकृति तथा वन्यजन्तु संरक्षण हुने बताए ।
केरूङ्गा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सनबहादुर तामाङले विपद्बारे स्थानीयमा सचेतना बढेको बताए ।